एनी फेबर पहिले दफन गरियो, त्यसो गरे पछि, अब अचानक दफन गरियो। बुबा पिता विम फाबर त्रुटि? मार्टिन भिजल्याण्ड
मा दायर एनी फेबर, समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	27 मई 2018 मा	•9टिप्पणिहरु
हामी एक journalistic मिस मा घुमाउन सक्नुहुन्छ, तर एनी Faber कुरा जस्ता गम्भीर विषयमा असम्भव देखिन्छ तपाईं दाहसंस्कार संग अन्त्येष्टि भ्रममा छ। अब हामी टेलीग्राफ त अक्सर गल्ती बनाउँछ, तर एनी Faber को कि रूपमा लोप मामला मा त्यहाँ केही संग meddling पूर्ण सम्पादकीय छ मलाई देखिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। कसैलाई दफन गरिएको वा दण्डित गरीएको रिपोर्टमा तपाईं कसरी गलत हुन सक्नुहुन्छ? अक्टोबरमा 21 डे Telegraaf ले भन्यो कि अर्को फर्न अर्को दिन दफन गरिनेछ। त्यो रात राति सन्देश परिवर्तन भयो र एनी अचानक सजाय हुनेछ। धेरै भावुक कथामा भोलिको भोक्सकटन्टमा, जसमा ऐन फाबरको बुबा एक धेरै राम्रो लिखित आँसु-टिंगलिंग उपन्यासमा मुख्य चरित्र जस्तो देखिन्छ र छाप धेरै राम्रो लिपि लेखक द्वारा बनाईएको छ।हुनत, Volkskrant निम्नलिखित भन्छन्: 'न एन्नेस मजेदार विम केवल एक कुरा सोच्न सक्छ: यो कसरी भयो? '
पिताजीले सोचेको छैन कि प्रकरण पछि? यस्तो अवस्थामा, तपाई गलत छैन? यदि तपाईं आफ्नो छोरीलाई जोगाउनुहुन्छ भने, यो तपाईं संग रहन्छ कि ठूलो प्रभाव को एक अनुष्ठान हो। त्यहि कृतिमा लागू हुन्छ। यो यस कथामा एकदम आवश्यक तत्वहरू छन्, जसबाट तपाईंले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कि हामीले धेरै ठूलो र राम्रो तरिकाले निर्देशित PsyOp सँग सम्झौता गर्न सक्दछौं।
तपाईं किन जस्तै केहि गर्न चाहनुहुन्छ? तपाइँ किन डिजिटल रूपमा सबै फोटोहरू सिर्जना गर्नुहुन्छ अपराध र हत्याको घटनालाई दृश्यमा राख्न? कुन मूर्खले यसलाई सोचिरहेको छ कि यो एक PsyOp छ concocts! उसोभए, तपाईं जो उथलपुथल मा देश राख्दछ एक भावना-प्रोभोकिंग grandiose हत्या, यदि मुद्रण द्वारा जो तपाईं कहिल्यै सामान्य हुनेछ द्वारा, यो उपयोगी छ मुद्रित गर्न कानून छ भने। यो तपाईं अदालत यो आवश्यक छ कि पाता भने भविष्यमा मानिसहरूले मानसिक रोगको चिकित्सक वा मनोरोग परीक्षा को हस्तक्षेप बिना कैद गर्न सकिन्छ पुग्न अनुमति दिन्छ भने, तपाईं पुरानो सोभियत संघ मा भयो र तथाकथित 'के को अवस्थामा पुग्यो हुनेछ मतभेद '। तिनीहरू दया बिना बन्द रहन सक्थे; कुनै कुखुराले त्यसो भएन। तपाईंको जीवनको लागि राज्यको निपटानमा यदि अदालतले निर्णय गर्दछ। त्यसैले यी अनुपात एक PSYOP सामान्यतया शुद्ध हरर रूपमा मानिन्छ हुनेछ भनेर कानून लागि मान्छे कल सुनिश्चित गर्न सक्छन्, तर किनभने सबैलाई भयानक हत्या र भयानक हत्यारा माइकल Panhuis हृदय छोयो छ, सबैलाई यो नयाँ कानून गले। एक अवस्थाको रूपमा, तपाइँ त्यसोभए सरल छ कि सबैलाई मात्र सीमित गर्न सक्नुहुन्छ। हामी उर्दू मा या चीन जस्तै देशहरु को लागि औंला गर्न को लागी रुचि गर्छन, तर फेरि धेरै स्मार्ट मार्केटिंग को माध्यम ले पीएसओपी को रूप मा मान्छे को बेच दिए।
शुक्रबार 20 मा टेलिग्राफ वेबसाइट खोलियो जो कोहीले पढ्न सकेन कि एनी फेबरलाई दफनाएको थियो। 21 अक्टोबर अपडेट 23: 32 घण्टा सन्देश समायोजित भयो र एनी अचानक सजाय भयो। डे Telegraaf त्यस समयमा केवल url परिवर्तन गर्न बिर्सनुभयो, त्यसैले यो अझै पनि दृश्यात्मक थियो कि तिनीहरूले आफ्नो दिमाग परिवर्तन गरेका थिए। बीचमा तिनीहरूले url र त्यसैले एनि समायोजन गरेका छन् (अनुसार यो सन्देश) क्रिम। त्यसैले यो अजीब छ कि "बुबा" विम अब एक अंतिम संस्कारको बारेमा कुरा गर्दैछ। आह, मानिस केवल यति भावनात्मक रूपमा भ्रमित छ कि उहाँ गलत छ।
तलका भिडियोहरू हेर्नुहोस् भन्ने पत्ता लगाउनको लागि के तपाईले हामीलाई चित्रहरू, तस्बिरहरू र क्यारेक्टरहरूको ध्वनि देखाउन चाहनु भएको छ भन्ने पत्ता लगाउनका लागि जुन अवस्थित छैन वा वास्तविकतामा अवस्थित छ। के हुन सक्छ कि हामी ठूलो अनुपात को PsyOp (यस्तो प्रविधि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ) एक कानून को माध्यम ले धक्का गर्न को लागि कि सबै को सडक देखि चुन सकते हो? हुन्छ एडिथ शिपर्स त्यसपछि अझै पनि उनको सजा? 'समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान"एक तरिका हो जसमा तपाईंले समस्या सिर्जना गर्नुहुनेछ र त्यसपछि मानिसहरूको भावनात्मक प्रतिक्रिया साबित गर्नुहोस्, र त्यसपछि उनीहरूलाई समाधान प्रदान गर्नुहोस् जुन तिनीहरू कहिल्यै स्वीकार गर्दैनन्। एक 'समाधान' जुन सबैले छुन सक्छन्, तर कसैले पनि सम्झना गर्दैन किनभने यो धेरै भावना उत्पन्न भयो।
स्रोत लिङ्क सूची: volkskrant.nl
प्रकारका विरुद्ध ऐन फाबर विधानले माइकल पी। गोप्य रूपमा जनताको विरुद्धमा उत्प्रेरित गर्छ
एनी फेबरको हत्या अझै पनि कुनै प्रमाणपत्र बिना एक कथा हो
पीटर आर। डे वेजले एनी फेबर मनोचिकित्सकलाई बुबाको शिकार माइकल पी को बारे मा सन्देश संग कताई जारी राखन मद्दत गर्दछ।
शरीर अनी फेबरले पदनाम पछि माइकल पनहुज भेट्टएपछि, पहिलो पटक हराएको 13 दिन
ऐन फाबरको कोटमा डीएनए माइकल पनहुजको नेतृत्व गरे तर धेरै ढिलो भयो!
ट्याग: एनी, एनी फेबर, विशेष, माइकल पी।, माइकल पनहुज, psyop, बुबा, बलात्कृत, हत्या, Wim Faber, मामला
27 मई 2018 मा 13: 45
यो सबैलाई दफन गर्ने व्यक्तिलाई फोन गर्न धेरै अजीब छ, पछि क्रिम र फेरि दफन गरियो। यदि त्यो दफन छ भने त्यो कहाँ छ? के हामी नागरिकहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौं?
राम्रो छ कि तपाईं पल्समा औंला राख्नुहुन्छ।
जस्तै हामी जान्दछौ, नीदरल्याण्डमा केहि पनि हुन सक्छ। सकारात्मक तरिकामा मतलब छैन। यो एक खतरनाक देश हो। खास गरी जब तपाईं स्थिति क्यू, प्रणालीको प्रणाली आलोचना गर्नुहुन्छ। नेदरल्याण्डले आफूलाई बदसूरत, अप्रिय गरी लुकाउन प्रेसटेटटहरूमार्फत अधिकार र मानव अधिकारको देशको रूपमा बेच्दछ। बाहिर सबै कुरा राम्रो देखिन्छन्, प्रोटोकोल्लोज यहाँ, बगैचा राम्रोसँग अपडेट हुन्छ। नेदरल्यान्ड्स ड। जेकिल र श्रीमान हाइड। कुनै नैतिकता छैन, तर जहाँ त्यो नै नैतिकतामा लाग्न सक्दछ जबसम्म नै नैतिकता कमाउन सक्दैन। वैसे यो एक कारसेल देश, Witwasland आफ्नो व्यापक कर सम्झौता संग।
27 मई 2018 मा 20: 03
त्यो शुक्रवार को उल्लेखनीय अप्रत्याशित अंतिम संस्कार थियो, 20e ले नै भयो, आफैलाई पहिले देखि नै हिसाब थियो। एक दिन अघि, मैले पाठकहरुलाई सम्झना दिलाए कि अहिले सम्म कुनै अंतिम संस्कारको कुनै संकेत थिएन। निस्सन्देह, बहाना अर्को दिन थियो जुन परिवार कुनै पत्रकार नहीं चाहियो र यही कारण यो पनि सुरक्षा गार्ड थियो। आखिर, हामी सबैसँग यो देशमा वास्तविक पत्रकारहरू छन् जुन साँच्चै अनुसन्धान गर्छन र उनीहरूले तपाईंलाई रोक्न पर्छ। अथवा त्यहाँ त्यहाँ कुनै दर्शकहरू चाहँदैनन् किनकि विशेष गरी "परिवार" लाई तस्वीरमा आउन अनुमति छैन? तपाईंको बच्चा वा प्रेमिका हराइरहेको थियो भने के गरौं र हत्या भएको थियो? एक चाचा हन्स फेबरबाट सुपर सुपर सञ्चार विशेषज्ञलाई सबैलाई छोड्नुहोस्?
27 मई 2018 मा 14: 15
हाई मार्टिन, फबर एक यहूदी परिवार हो? यहूदी विश्वास अनुसार यहूदीहरूले cremated छैन तर केवल गाडे ... म लाश जलाउनु गर्न ... किन एक यहूदी यहूदी परम्परा विरुद्ध cremated छ तपाईं माग्छ प्रश्न हो चाहनेहरूको कुनै पनि यहूदीहरूले थाहा छैन ... यहूदीहरूले गाडे छन् को आगमन संग भनेर येशू पुनर्जीवित हुनुहुनेछ ... उत्पीडनको साथ यो काम गर्दैन।
27 मई 2018 मा 14: 53
नयाँ टिप्पणीकर्ताबाट राम्रो टिप्पणी ... किन अचानक पप अप गर्दछ?
यो प्रश्नलाई तिरस्कार गर्न को लागी कि यहूदीहरू क्रान्ति गर्ने र यस तरिकामा चाँडै नै मिडिया एक्सचेंज कथाहरु किन छलफलको बारे मा उल्लेखित छ।
मुद्दा यो हो कि कथा मेडिया मा परिवर्तन भएको छ र यो उल्लेखनीय उल्लेखनीय छ। तपाईं अचानक एक शत्रुको बारेमा बोल्नुहुन्न, यो पहिलो अंतिम संस्कार पछि र अचानक एक अंतिम संस्कारको कुरा गर।
27 मई 2018 मा 15: 05
वास्तवमा, किन यो यो उल्लेखनीय बनी रहन्छ ... सबै पक्षमा खुसी छ ....
27 मई 2018 मा 18: 39
बुबाले कसरी "यो कसरी भयो?" र हामी आश्चर्यचकित हुन सक्छौं कि उनी कसरी दफन गरिसकेको थियो, त्यसो गरे पछि र पछि फेरि दफन भयो।
र यो सबै थियो, पछि "कसरी यो हुन सक्छ" भनेर? यो एक मूर्ख मूर्ख थियो, होइन?
यो कसरी धारणा व्यवस्थापन संग काम गर्दछ। झूटो दोहोर्याएर राख्नुहोस् हानिकारक मतभेद तपाईं ती मीडियाको हुनुभयो।
27 मई 2018 मा 18: 41
अतीतमा त्यहाँ त्यहाँ क्रेमलिन फोटोटोटेजहरू मन परेका थिए, एक जनाले मात्र केहि कुरा गर्न मिल्दैन
हालै, कम्तिमा करिब आधे शताब्दीका लागि उनीहरु पहिले देखि नै हुन सक्दछन्, तपाईलाई एक्लै गरौं
एक सरकारी बजेट पछि तपाईं जारी राख्न सक्नुहुन्छ। प्रविधिको सुधार तर हेरफेर हुन्छ
27 मई 2018 मा 18: 42
फिल्म 'जेनेरेट कृत्रिम खुफिया' सम्बन्धी, टिन्टिन कुनै पनि मामला धेरै उत्साहजनक छ।
27 मई 2018 मा 20: 43
म पनि बुझिन किन कि यो गोप्य राखिएको थियो कि त्यो दफन गरिनेछ, कम से कम यो गोपनीय मिति। यी चीजहरू जुन तपाईंले गोप्य राख्नुहुन्न। एक जना पातहरू अझ बढी ध्यान दिन्छन्। जस्तो कि गयो, जस्तो देखिन्छ कि यो कहिल्यै अस्तित्वमा नभएसम्म इरादा हो। एक पटक फेरि कसैलाई थाहा छ कि उनी कहाँ दफन गरियो? यही प्रेसले आफ्नो सामान्यतया सावधान अनुसन्धानको साथ गरेको छ। कुच खरानी
« भिडियो प्रमाणपत्र कि BUK Telar को JIT MH17 भिडियोहरू हवाई आपदाको लागि बनाइएका छन्: Bellingcat टोकरी मार्फत फालिन्छ
लिम्बर्ग नियमहरू: तेस्रो सेक्सको दर्ताको लागि समय, 'लिंग विविधता' »
कुल भ्रमण: 10.920.097
के एलोन मुस्किलसँग ट्रान्सगेंडर व्यक्तिसँग सम्बन्ध छ? यहाँ यी ग्रिमहरूको संगीत अध्ययन गर्नुहोस्
क्यामेरा र मस्तिष्क चिपले अन्धा मान्छे फेरि देख्न सक्छ!
hans coudyser op तपाईंको वर्तमान जीवनको लागि महत्वपूर्ण जानकारी
guppy op के एलोन मुस्किलसँग ट्रान्सगेंडर व्यक्तिसँग सम्बन्ध छ? यहाँ यी ग्रिमहरूको संगीत अध्ययन गर्नुहोस्
Riffian op तपाईंको वर्तमान जीवनको लागि महत्वपूर्ण जानकारी
मार्टिन भिजल्याण्ड op तपाईंको वर्तमान जीवनको लागि महत्वपूर्ण जानकारी
1.611 अन्य सदस्यहरू सामेल हुनुहोस्